Amin Arts oo sawir ka sameeyey xaaladda murugada leh ee uu ku jiro Shariif Xasan - Caasimada Online
Home Warar Amin Arts oo sawir ka sameeyey xaaladda murugada leh ee uu ku...
Amin Arts oo sawir ka sameeyey xaaladda murugada leh ee uu ku jiro Shariif Xasan
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa dhawaan magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Maamulka Koonfur Galbed ka soconayo mooshin weyn oo looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka Shariif Xasan Shiikh Aadan.
Shariif Xasan ayaa baarlamaanka Koonfur Galbeed ku yeeshay mucaarad badan isago hadda damacsan inuu isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada si uu meesha uga saaro shaqsiyaadka sida weyn uga soo horjeedo ee ku jiro wasiirada.
Shariif Xasan ayaa dhawan xilka ka qaaday wasiir ka tirsanaa golihiisa wasiirada kaasoo ahaa xildhibaan markii uu saxaafadda kula hadlay Muqdisho kana dhawaajiyey inay xilka ka qaadi doonaa Shariif Xasan Shiikh oo ay ku tilmaameyn inuu yahay shaqsi aan ka shaqeyneyn danaha Koonfur Galbeed.
Haddaba Amin Arts oo ah farshaxaniinto Soomaali ah ayaa hadda ka sameeyey xaaladda Shariif Xasan uu ku jiro oo uu ku tilmaamay inay tahay siriq uu isaga awal dhigay.
Haddaba hoos ka arag sawirka uu Amin arts ka sameeyey Shariif Xasan Shiikh Aadan.